Love Alarm: Season 1 (2019) - Myanmar Asian TV
Love Alarm: Season 1 (2019)
မနေ့ကပဲ Netflix ကနေ ထွက်ရှိလာတဲ့ KDrama လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်… season 1 မှာ အပိုင်း ၈ ပိုင်း ပါဝင်ထားကာ မထွက်ခင်ကတည်းကပင် poster တွေ teaser တွေနဲ့ Kim So-Hyun လေးရဲ့ ချစ်စဖွယ် ပုံလေးတွေကြောင့် KDrama ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားလျှက်ရှိတဲ့ Drama လေးတစ်ခုပါ…
Comic Artist တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆရာမ Chon Kye-Young ရဲ့ Love Alarm လို့အမည်ရတဲ့ webtoon ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်…
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကို ပြောပြရမယ်ဆိုရင် –
ကိုယ်နဲ့ ၁၀ မီတာ ပတ်လည်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ လူတွေထဲက ကိုယ့်ကို ကြိုက်နေတဲ့သူရှိရင် အသံထမြည်တဲ့ Love Alarm ဆိုတဲ့ Mobile App လေးက လူငယ်တွေကြားမှာ ခေတ်စားပါတယ်…
လှပပြီးထက်မြတ်တဲ့ အထက်တန်း ကျောင်းသူလေး ကင်ဂျိုဂျို (Kim So Hyun) က အပြင်ပန်းမှာတော့ တတ်ကြွပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံပေါက်ပေမဲ့ တကယ်တော့ မိဘတွေဆုံးသွားပြီး နောက်မှာ အဒေါ်မိသားစုနဲ့ အငြိုငြင်ခံပြီး အတူတူနေနေရတာပါ… သူရဲ့ဖုန်းထဲမှာတော့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Love Alarm ဆိုတဲ့ application မရှိပါဘူး…
ဟွမ်ဆွန်းအို (Song Kang) ကတော့ ဂျိုဂျိုတတ်တဲ့ အထက်တန်းကျောင်းမှာ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ.. သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ လီဟယ်ယောင်း (Jung Ga Ram) က ဂျိုဂျို့ကို သဘောကျနေကြာင်း ဟွမ်းဆွန်းအို သိလိုက်ရတဲ့အခါ သူတို့ သုံးယောက်ကြားမှာ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်ကြမလဲ?
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖုန်းကွယ်သင့်/မကွယ်သင့်သော ခံစားချက်မှန်သမျှက mobile application တစ်ခုဆီမှာ သိရနေသောအခါ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်ကြမလဲ? ထို application လေးကြောင့် ဖြစ်လာမယ့် ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေကို ကြည့်ရှုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
Rating အရ ကြည့်မယ်ဆိုရင် MyDramaList မှာ 7.9/10 ရရှိထားကာ လူငယ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့် ကျောင်းနောက်ခံ romance ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
Translators : Ziven, Mee Nge, ^Amy^, Min Theim Kyaw, KLP & Kathari Aung
DOWNLOAD FOR MEGA UP
= = = = = COMPLETED = = = = =
Starring: Choi Joo-won, Go Min-si, Jung Ga-Ram, Kim Hee-chang, Kim Si-eun, Kim So-hyun, Shin Seung-ho, Song Geon-hee, Song Kang, Song Seon-mi,
August5ရကျနမှေ့ာ MBC ရုပျသံလိုငျးမှာ စတငျ ထုတျလှငျ့ခဲ့တဲ့ Korea Fantasy, Comedy, Crime ဇာတျလမျးတှဲတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ … အဓိက သရုပျဆောငျတှအေဖွဈ ပရိသတျအခဈြတျော Rain နှငျ့အတူ Kwak Si-yang, Lim Ji-yeon တို့က ပါဝငျ သရုပျဆောငျထားပါတယျ … ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးကို မိတျဆကျပေးရမယျဆိုရငျ –…
2018ထွက် Ongoingလေးတစ်ကားဖြစ်တဲ့ Where Stars Landတဲ့ ??? အဓိကမင်းသားကတော့လီဆူယွန်းအဖြစ် Tomorrow with you/Signal ထဲကမင်းသား Lee Je Hoonဖြစ်ပါတယ် လီဆူယွန်းရဲ့ဇာတ်ကောင်နေရာကတော့ လေယာဉ်ခရီသည်ဝန်ဆောင်ရေးဌာနမှာအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီး တစ်ယောက်ထဲနေတတ်သူ သူမှာရှိနေတဲ့စွမ်းအားကိုလျိုဝှက်ပြီးသာမာန်ဘဝနဲ့နေထိုင်ချင်သူတစ်ယောက် အဓိကမင်းသမီးလေးကတော့ဟန်ယောရွန်းအဖြစ်မင်းသမီးလေးကတော့ မိတ်ဆက်စရာမလိုအောင်မကြာခင်ကမှပြီးသွားတဲ့’Robot’ဇာတ်ကားထဲကrobotမလေး Chae Soo Bin ဖြစ်ပါတယ် ဟန်ယောရွန်းရဲ့ဇာတ်ကောင်နေရာကတော့သူလုပ်ချင်တဲ့လေဆိပ်ဝန်ထမ်းကိုခက်ခက်ခဲခဲရရှိထားသူ စိတ်အားထက်သန်ပြီးအလုပ်ကိုကြိုးစားပေမယ့်အမြဲပြဿနာရှာတတ်သူ လုပ်ငန်းခွင်ကိုဆူညံအောင်လုပ်နိုုင်စွမ်းရှိသူ လို့လေဆိပ်ဌာနမှာနာမည်ကြီးသူ…
Love Detective Sherlock K ( 2015 )
10 mins min
2015မှာထွက်ရှိထားတဲ့ Mini serieလေးပါ Main castsတွေကတော့ Nam Bo Ra,Park Min Woo,Jung Jin Young(B1A4)နဲ့ Yoon Bo Miတို့ကပါဝင်ထားကြပါတယ် Ratingမှာလည်း Mydramalist 6.4/10ထိရရှိထားတဲ့ mini sieerလေးပါ Review အကိုဖြစ်သူသေဆုံးမှုကိုရှာဖွေဖို့ လှပတဲ့မိန်းကလေးအဖြစ်မှ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်လိုဟန်ဆောင်ထားပြီး မုသားကိုဖတ်နိုင်သူ ရှားလော့Kအဖြစ်လူသိများကျော်ကြားကာ သူ့ရဲ့ပွင်းလင်းတဲ့အပြောတွေကြောင့် မိန်းကလေးအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကိုရှိထားသူ “ယူနာ”နာမည်ကြီးတော့စတားတစ်ယောက်…
Trailer: Love Alarm: Season 1 (2019)